Ukuhlolwa Okuqinile Kuzothuthukiswa Emgwaqweni Omkhulu Along Bayram | RayHaber | raillynews
IkhayaJIKELELEUkuhlolwa Okuqinile Kuzosetshenziswa Emigwaqweni Ekhulu Ngesikhathi Somkhosi
23 / 05 / 2020 JIKELELE, Highway, HEADLINE, KUSASA NGAMINYE, TURKEY
Ngesikhathi samaholide, ukuqashwa okuqinile kuzokwenziwa emigwaqweni emikhulu
Yize kunokubhekelwa ezweni lonke ngesikhathi se-Eid al-Fitr, kuzoqalwa ukuqashwa okuqinile emigwaqweni emikhulu.
Isamba samaphoyisa namaGendarmerie abalelwa nsuku zonke ngesikhathi se-Eid al-Fitr 18 izinkulungwane 564 izisebenzi zomgwaqo zizobamba iqhaza, kuthi ngesikhathi samaholidi, amaphoyisa kanye ne-gendarmerie 111 izinkulungwane 384 abasebenzi bazoba semsebenzini.
Kwezokuhamba kwabagibeli % 50 ukwenziwa kwamakhono kuzoqhubeka. Izincwadi zemvume yezakhamizi zethu ezineminyaka yobudala engama-65 nangaphezulu kanye nalabo abanikezwa izimvume zokuhamba ngaphakathi kokuvunwa kwemikhiqizo yezolimo zizobhekwa. Isicelo semodeli yemodeli siyoqhubeka ezifundeni lapho kugxilwa khona ithrafikhi. Kulomongo Izingcezu ze-767 Imoto yamaphoyisa eyimodeli ibekwe emigwaqweni. Noma kunendlela ebekelwe ukuya ezweni lonke, amaqembu omgwaqo azoqhubeka nokulawula kwawo emigwaqweni ngesikhathi soMkhosi weRamadan. Ikakhulu leli holide; Ngombhalo wemvume yokuvakasha, kuzokwandiswa ukuhlolwa emigwaqweni ukuze kuvikeleke izingozi ezingaba khona ngenxa yomfutho walabo abaneminyaka engama-65 nangaphezulu kanye nabalingani babo ukuze baye lapho bafuna khona, nalabo abadedelwa isikhathi sokuya ekhaya kulabo abafuna isivuno sezolimo.
Ngesikhathi se-Eid al-Fitr, isilinganiso samaphoyisa nsuku zonke kanye ne-gendarmerie ezindleleni zethrafikhi Izisebenzi zomgwaqo ezingama-18.564 zizoba semsebenzini. Inani ngesikhathi seholide Ithimba / ithimba lezimoto ezingama-59.052 kanye namaphoyisa noGendarmerie Abasebenzi abangama-111 384 XNUMX bazoba khona.
Futhi Nenkonzo yethu Izinyathelo Zokugibela zeRamadan Uthumele amasekhethi kohulumeni bezifundazwe abangama-81. Kwashiwo kwiSekethe ukuthi yize iholide lihlelelwe izinsuku ezi-23 phakathi kuka-26- 2020 Meyi 4, kuzosetshenziswa izindlela zomgwaqo izinsuku eziyi-22 phakathi kuka-27-2020 Meyi 6.
Amathimba Okugada Abelwa Imigwaqo Ephakathi
Ukubona ukuhlolwa ezindaweni zokuhlola ekungeneni nasekuphumeni kwezifundazwe ukuze kulawulwe abagibeli abagibeli ngaphakathi nangaphandle komuzi ngaphakathi kwesilinganiso sezinyathelo ezithathwe izinhlangano zomgwaqo ukuqinisekisa ukuthutha okuphephile kwezakhamizi zethu nezinyathelo zokuvikela ukusakazeka kwe-COVID-19;
aqhamuka emaphoyiseni 24 ehlanganisa abasebenzi 8 iqembu,
gendarmerie 40 ehlanganisa abasebenzi 20 iqembu labelwa.
Njengawo onke amaholide, leli holidi lizogxila ezilawulweni zomoya. Kulomongo 16 ngendiza enophephela emhlane esifundazweni 76 Ukulawulwa kwethrafikhi kuzokwenziwa nge-drone esifundazweni.
Izimoto zamaphoyisa ezingama-767 Model Zibekwe Emigwaqweni
Isicelo semodeli yemodeli yohlobo olujwayelekile lizoqhubeka ukuze kwandiswe ukubonakala kwabasebenzi bezimoto ezindaweni lapho ukwephulwa komgwaqo nezingozi kukhuphuka nasezindaweni lapho kugxiliswa khona izimoto. I-78 (amaphoyisa 767 / gendarmerie 420) ezifundazweni ezingama-347Imoto eyi-Model / Model Traic Crew Vehicle yabekwa ngokusobala ezindleleni lapho kwahlangana khona izingozi, ngamalambu amakhulu nemivimbo ekhanyayo.
Imibhalo Yohambo Izokhethiwe
Ukuqaliswa kokusebenza kwamaphesenti angama-50 kuzoqhubeka nokuhamba kwabahamba ngezinyawo. Ngaphezu kwalokho, emigwaqweni, ukuvuna imikhiqizo yezolimo, njll., Kanye nezakhamizi ezingaphezu kweminyaka engama-65. Izincwadi zemvume yezakhamizi zethu ezinikezwe imvume yokuhamba sezizohlolwa. Ukulawulwa kuzokwandiswa ezikhumulweni naseziteshini eziphakathi nendawo, futhi amabhasi wokuxhumana nezokuhamba ngepirity ngeke avunyelwe, ngaphandle kwezindawo ezivunyelwe kanye nezindawo ezivunyelwe. Kuzohlolwa wonke amabhasi ohambweni, abashayeli bawo bazokwaziswa ngokungaphuli imithetho, futhi abashayeli nabagibeli bagqoke amabhande esihlalo phakathi nohambo. Ngokubheka izingozi ezibandakanya amabhasi, ikakhulukazi phakathi kwe-02.00-08.00 naphakathi kwe-05.00-07.00, lapho ukulahleka kokunaka okuhlobene nokukhathala kwenzeka, abashayeli bazomenyelwa ngaphandle kwemoto, kuzodingeka izilawuli ezidingekayo nokuphumula. Emigwaqweni emikhulu yabasebenzi bethrafikhi, amakhamera kufanele akhanyiswe ngaso sonke isikhathi. ukubonakala ngaphambili, kubashayeli Ingozi Etholakele Yokubamba Ubungozi izogcinwa iphila ngaso sonke isikhathi.
Ukuxhumana ubuso nobuso kuzosungulwa
Ngesikhathi sokuhlolwa, abashayeli bezimoto bamiswa ezindaweni lapho kutholakala khona amaqembu abahumushi. Ubuso nobuso ukuxhumana Kuzosungulwa kanti nabashayeli abavela emendweni omude bazophumula.
Ukuhlolwa kweRadar kuzoqhubeka, ikakhulukazi emizileni lapho izingozi ezihlobene ngesivinini zigxiliwe. Kuzo zonke izithuthi ezinobude obungamakhilomitha angama-2.155 Ijubane eliphakathi nendawo kuzoqhubeka ukucwaningwa. Eminyakeni emi-3 edlule, kuzohlelwa izindlela ezisebenzayo futhi ezibukhali futhi zisetshenziswe emizileni engama-18 ezifundazweni eziyi-20, lapho izingozi zitholakala khona ukuthi zinkulu ngesikhathi samaholide.
Ezikhungweni zedolobha, izindlela zokuhamba ngezimoto zizokwandiswa kubafel 'ukholo, ezingavakashelwa izihlobo zokuqala zabafel' ukholo. Ezindaweni lapho kuba nezingozi ezinkulu zabahamba ngezimoto, umgwaqo ohamba ngezinyawo zabahamba ngezinyawo, ukuwela izinyawo zabahamba ngezinyawo, izindlela zokuphambana, izimoto ezipakiwe ezikhubazekile ngaphambili nangasemgwaqweni, ezithinta ukuphepha kwabahamba ngezinyawo, zizosuswa ngokushesha. Ukuhlola nemisebenzi yolwazi mayelana nokuhamba phambili / ukuphepha kwabahamba ngezinyawo kuzoqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka.
Izimoto ezithwala abasebenzi bezolimo zonyaka ngeke zivunyelwe ukuhamba phakathi kuka-24.00-06.00. Izimoto zezolimo ezolimo, ogandaganda, abahlanganisa, njll. Bazovinjelwa ukuthi bangabuki ithrafikhi ngaphandle kokuthatha izinyathelo zokuphepha ezidingekayo.
Amaqembu Ethrafikhi Azolandelwa Ngokushesha
Kuwo wonke ama-Audit; Emisebenzini yemfundo yokwazisa nokuqwashisa ngokuphepha kwezimoto kubashayeli nabagibeli Ikhefu Elifushane Lokuphila yenziwe ngesiqubulo Imigudu Yempilo izosetshenziswa ngempumelelo. Ukulandela umkhondo wethrafikhi nabasebenzi emzileni nokuhlolwa kwabo manjalo Iphrojekthi Yokulandelela Uhlelo (UTP)Ukusebenza ngempumelelo kuzoqinisekiswa futhi kuzokwenziwa ukucwaningwa kwezimali kusuka esikhungweni.
maphakathi Uphiko Lokweluleka Ngengozi Yezimoto isimo somgwaqo nezingozi ezweni lonke zizolandelwa khona manjalo futhi kuzongenelelwa.
Ingxenye ebalulekile yokubhekwa ekuqinisekiseni indawo ephephile yethrafikhi 34.218 Kumhloli Othembekile Wezimoto Ngisekhaya kepha imithetho yemigwaqo isemqondweni wami. Umhloli wethu ohlonishwayo, konke ukwephula umthetho okuthola kusindisa impilo. Siyabonga ngegalelo lakho ekuphepheni kwezimoto futhi sikufisela iholide elihle. Ngcono Njalo Minyaka In traffic I-SMS enokuqukethwe izothunyelwa.
Imibiko yokuhlolwa kwamigwaqo yamemezela
Imigwaqo emikhulu iyahlanzwa unyaka wonke eKocaeli
I-Balıkesir Dursunbey Post Train izothatha abagibeli ngesikhathi seBraram
Ibhasi Kuzo zonke izinsuku e-Antalya, i-Antray, i-Nostalgic Tram Free
I-50 Ukuthuthwa Okuncishisiwe e-Istanbul
Ukuhamba kwamahhala ngesikhathi samaholide e-Antalya
I-Red Bus, i-Antray no-Nostalgia Tram Free Ngomkhosi
Amabhuloho emigwaqo kanye namabhuloho aseBosphorus akhululekile phakathi namaholide
Ukuthuthwa koMphakathi Free Along Manisa
Ukuthutha Okusesidlangalaleni e-Bursa 50 Ehlisiwe
Amabhasi kaMasipala no-Tram Free
Ukuhamba kwabagibeli abangaphakathi
abasebenzi bezolimo zonyaka
Imoto Ye-Model Traffic Crew
Iseluleko Ngengozi Yethrafikhi
Namuhla Emlandweni: 29 May 2006 TÜVASAŞ, Izitimela zase-Iraq
Ukuntuleka kwamanzi kwe-6 kuzosetshenziswa eKocaeli ngoDisemba ngoLwesine ngaphansi kwe-YHT
Ezokuthutha Zomphakathi Ezamahala ku-Kocaeli
Ukuqondiswa Okuvamile Kwemigwaqo Emigwaqweni Yomgwaqo Emgwaqeni
Ukuthutha komphakathi ku-Bayram eMersin Free